वडामा कार्ययोजना भए अनुरुप बजेट अपुग छ तरपनी वडाको समृद्धि हाम्रो लक्ष्य हो : वडा सदस्य कलवार
मंसिर ८, २०७६ निलम पंत
वीरगंज महानगरपलिका वडा नं ३० लालपर्सा स्थित बसोबास गर्दै आएका पिता जग साह कलवार र माता पन्ना देवी कलवारकी कान्छी छोरी हुन् रिता देवी । वि.सं. २०२८ साल असार १५ गते जन्मिएकी रिता देवी तीन बहिनी र दुई भाई मध्येकी कान्छी सन्तान हुन् । २०६२ सालदेखी राजनीति क्षेत्रसंग आबद्ध रहेकी रिता देवी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । प्रदेश नं. २ को क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत रहेकी उनि १३ वर्षको कलिलो उमेरमै वीरगंज महानगरपलिका वडा नं १ छपकैया स्थित बसोबास गर्दै आएका शम्भु भगवान कलवार संग वैवाहिक बन्धनमा बाधिन् जसले गर्दा आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन नसकेको उनको भनाई छ । साधारण लेखपढ गर्न जानेपनि उच्च अध्ययनबाट बञ्चित रहेकाले अहिले आफुलाई केही अप्ठ्यारो हुने गरेको उनी बताउँछिन् । यस अंकमा उनै वडा सदस्य रिता देवी कलवारसंग स्थानीय तहमा महिलालाई अवसर संगै कत्तिको चुनौति छ लगायत विभिन्न प्रश्न गरेका छौँ ।
१) निवार्चित भएको २ वर्ष नाघिसकेको छ । यहाँको वडामा के कस्तो समस्याहरु छन ?
वडा नं. १ मा समस्या नभएका होईनन् । तर दलित र पिछडिका विपन्न परिवारको बस्ती रहेको क्षेत्र हरुमा (ढागड) ,डोम, नदि छेउको बस्ती रहेको छ । सो ठाउँमा तिव्र विकास हुन सक्ने अवस्था छैन् । निर्वाचित भएपछि केही सो क्षेत्रहरुमा समान्य परिवर्तन भएको छ । पहिला बाटो–घाटोको सुविधा पनि थिएन । अहिले वडाको बजेटबाट वाटो–घाटो बनाउनुको साथै घर–घरमा चर्फी, सरसफाई खुल्ला दिशा मुक्त भएको छ । यी सबै परिवर्तनकै सुचक त हुन ।
२) पिछडिएको टोल त्यसमा पनि समस्याले ग्रसित । पहिला भन्दा अहिले परिवर्तन भएको भन्नु भो, खासमा चुनौती कतिको छ ?
अवसर संगसगै समस्या र चुनौति पनि आएकै हो । जसले गर्दा निर्वाचनको समयमा वडाबासी समक्ष गरेको बाचा पूर्ण रुपमा पूरा गर्न सकेको छैन् भने हाल समस्या र चुनौतिका बाबजुद हामीले सडक र नाला निर्माण गर्नुको साथै खानेपानी र चर्पी उपलब्ध गराएका छौ । जनताको माग अनुसारको पूर्ती गर्न कठिन छ । कारण हामीसंग पर्याप्त बजेट नभएको कारण र बजेट कम भएकोले हामीहरु आफै सन्तुष्ट छैनौ । बजेटको अभावका कारणले वडा नं. १ धेरै पछाडी परेको छ ।
३) यहाँ आफ्नो कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हामीहरुले जुन अठोट र कार्य योजना बोकेर निर्वाचित भएका थियौ त्यो अनुसारको सन्तुष्टी छैना्ै । हाम्रो वडामा हामीले गर्नु पर्ने धेरै कामहरु बाँकी छन् । अरु वडा भन्दा हाम्रो वडा पिछडिएको छ । पूर्वाधारहरु जीर्ण अवस्थामा छन् । त्यसको मर्मतसंभारका लागि बजेटको आवश्यक्ता पर्दछ । बजेटकै कारण कामहरु हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो भिजन अधुरो छ त्यसैले पनि म असन्तुष्ट छु ।
५) पहिले मधेशी महिलाहरु घरमा मात्र सिमित हुन्थे । यहाँ घरवाट वाहिर निस्केर काम गर्दा घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?
वडा नं. १ को वडावासी र सदस्य भएकोमा म आफू गर्व गर्छु । किनकि जुन साथ सहयोग र मानसम्मान मलाई वडावासीहरुले दिएका छन् त्यो कमैले पाउँछन् । मैले मेरो कार्यमा घरपरिवार र समाजको एकदमै साथ सहयोग र सहकार्य पाएको छु । जसको कारण आज म यो स्थान सम्म आईपुग्न सफल भएको छु । म मात्रै हैन धेरै महिलाहरु छन् जो घरभन्दा बाहिर निस्केर समाज सेवा गरिरहेका छन् । पछिलो समम्यभन्दा अहिले महिलाहरु अगाडी बढेर कार्य गरिरहेका छन् र हाल धेरै समाजमा महिला प्रति सुधार आएको छ । घरपरिवारको पनि धेरै सहयोग छ ।
६) यहाँ निर्वाचित भईसकेपछि पुरुषवाट कतिको साथ र सहयोग पाउनु भएको छ ?
पुरुष भन्नुपर्दा घरपरिवार, समाज र मेरो कार्य क्षेत्रवाट मलाई धेरै उहाँहरुको साथ र सहयोग छ । उहाँहरु पनि मलाई धैरै नै सम्मान गर्नुहुन्छ ।
७) रिता जी, वडा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि व्यक्तिगत रुपमा आफु कतिको परिवर्तन हुनुभयो ?
पहिला देखि त धेरै परिवर्तन म मा आएको छ । पहिला घरको काम गरेर समय वित्थ्यो । जबदेखी म वडामा वडासदस्य भएर निर्वाचित भइ आउँदा काम गर्न गा¥हो थियो । म त्यो गा¥हो कामलाई सजिलो वनाएर काम गर्थे । तर वाहिर निस्केर कुनै काम गर्दा चाहे त्यो सानो होस या ठुलो । आफुले धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ । भनिन्छ नि सिकाइ नै जिवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यो सिकाइ नै मेरो लागि पाठ हो । पहिला भन्दा सहने क्षमता पनि म मा वढि भएको छ । आफनै नेतृत्व लिएर पनि महिलाहरु अगाडी छन् । लोकतन्त्रका साथ साथै गणतन्त्र पनि आयो, परिवर्तन नै हो ।
८) यहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्र साथसाथै गणतन्त्र पनि आयो । के गणतन्त्रले महिलाहरुलाई संस्थागत गरेको छ त ?
पहिला भन्दा अहिले पुरुषहरुले महिलाहरुलाई ठाउँ दिइराखेका छन् । त्यो त माथिवाट नै छुट्याएर आएको छ । स्थानीय तहमा पनि महिलाहरुलाई सम्मान दिइराखेका छन् । व्यवहारमा पनि परिवर्तन भएको देख्छु । महिलाहरु प्रति सकरात्मक सोच छ ।
९) महिलाहरुलाई अवसर दिए पनि लिन सकेका छैनन् भन्ने आरोप छ नि ! यहाँको वडामा त्यस्तो समस्या कतिको छ ?
तराईमा पुरुषहरुले महिलाहरुलाइृ धेरै अवसर लिन सकिरहेका छैनन् । अहिले के छ भने ३० प्रतिशत महिला घरवाट निस्केर कार्य गरिरहेका छन् । अवसरको खोजीमा पनि छन ३३ प्रतिशत हाम्रो अधिकार नै छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेका छन् । मद्येश त मद्येश नै हो । तराईका महिलाहरुलाई अफ्ठ्यारो छ । जो पढेलेखेका श्रीमतीहरु छन् । उहाँहरुलाई आफ्नै श्रीमानले अगाडी बढाइरहेका छन । कोही पुरुष चेतना भइकन पनि अचेत हुनुहुन्छ । जहाँको त्यही हुनुहुन्छ । उहाँहरुको श्रीमती अवसरबाट बञ्चित नै छन् । इच्छा भए पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।
१०) यहाँ विगत लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा नै हुनुहुन्छ । अहिले सम्म पार्टीबाट पाएको उपलब्धी के त ?
पार्टीबाट त मैले धेरै कुरा पाएको छु । पार्टीमा मेरो धेरै मान–सम्मान छ । म पहिला वडा नं. १ बाट वडा महिलामा पार्टी प्रवेश गरेको हु । तर छिटो–छिटो मलाई अगाडी बढाउने सपोर्ट पनि छ । वडा सदस्य पछि वडा प्रतिनिधि बनाइयो । त्यसपछि क्षेत्रिय प्रतिनिधि पनि छु । चुनाव लडाउनुभयो सहयोग धेरै छ । मलाई अगाडी बढाउन नै पार्टीको ठुलो हात छ । म धेरै–धेरै धन्यवाद दिन्छु, नेपाली कांग्रेसलाई र म आफुलाई कहिले पनि एक्लो महसुस गरेको छैन ।
११) यहाँ कसको प्रेरणाबाट राजनीतिमा आउँनुभएको हो ?
सानै देखि मेरो इच्छा थियो कि समाजसेवा गँरु । मेरो जेठाजुले मलाइ पार्टी प्रवेश गराउँनु भएको हो । जब देखि महिलाहरुको समावेशीता सुरु भयो त्यो बेलादेखि मलाई राजनीति गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउँनु भएको हो ।
१२) यहाँलाई समाजले हेर्ने दृष्टी कस्तो पाउनु भएको छ ?
वडा नं. १ मा मैले मेरो छवी बताउनु भन्दा पनि त्यहाँका वडाबासीहरुले बताउँछन् कि रिता देवी कस्तो छ ? म अनुगमन गर्न जाँदा मलाई साथ दिनुहुन्छ । म उहाँहरुबाट धेरै सपोर्ट पाएको छु । मलाइ पनि लाग्छ कि मलाइ माया, सम्मान गर्नुहुन्छ । म कहिले काहि समस्यामा पर्दा मेरो वडाबासीहरुले नै सहयोग गर्नु हुन्छ । म गर्व गर्छु मेरो वडाबासीहरुमा ।
आइतवार, मंसिर ८, २०७६, ०२:११:००
जेठ २५, २०७७ निलम पंत
जेठ २०, २०७७ निलम पंत